Sinamoni Mugcake | Kicheni Mapepa
Paive nenguva iyo mugcakes yaitora nzvimbo yepakati. Pfungwa yekugadzirira a wega wega chipanje keke mu microwave icho chaive chinhu chaikwezva kune vazhinji vedu. Chimwe chinhu chakatibvumidza isu kuti tizvibate isu pachedu kune chinotapira kurapwa zvakapusa uye nekukurumidza.
Nhasi uno makeke haane mukurumbira wakawanda asi ichiri sarudzo huru yekunakirwa neswiti inotapira. mabvazuva sinamoni mugcake Iyo ndeimwe yeakareruka andakaedza, asi zvakare imwe yeanopisa uye anotapira neiyo shuga nesinamoni kupera.
Unoshinga kuzvigadzirira here? Kuti uite izvi iwe unongofanirwa kuyera huwandu zvakanaka uye uteedzere nhanho nhanho yandinobatanidza pazasi. Pamwe kekutanga paunomusuwa microwave nguva asi kana mushure memasekonzi makumi mapfumbamwe zvisati zvaitwa, uchafanira kungozvipeta gumizve
Iyi sinamoni mugcake ine hunyoro hunyoro uye shuga inotapira inoita iyo dhizeti yepamusoro 10. Uye zviri nyore kwazvo kugadzira.
Kubika nguva: 2 M
Nguva yakazara: 12 M
5 tablespoons yeupfu
2 + 1 tablespoons shuga
½ teaspoon kubheka hupfu
1½ tablespoons bhata
¼ mukombe wemukaka
¼ teaspoon sinamoni
Mundiro diki tinosanganisa upfu, kemikari mbiriso, munyu uye 2 mashupuni eshuga uye woisa parutivi.
Mukapu yatichashandisa kugadzira mugcake (mukombe wakareba wekuseni) Sungunusa bhotela mu microwave.
Kana tanyungudika tinoiita kuti ipfuure nemadziro emukombe, kuitira kuti vazadzwe uye bhotoro rasara rinosanganisirwa mundiro neupfu.
Kuyo ndiro imwe chete isu tinowedzerawo mukaka uye vanilla essence uye sangana neforogo. Takabooker.
Pakupedzisira isu tinogadzirira iyo musanganiswa weshuga nesinamoni kusanganisa mundiro diki 1 kiyi yeshuga nesinamoni.
Fukidza ⅓ yemusanganiswa pachigadziko uye madziro emukombe wakazorwa watakagadzirira kugadzira mugcake.
Pashure tinodurura hafu yehupfu, imwe ⅓ yeshuga nesinamoni musanganiswa, imwe hafu yehupfu uye chetatu chesara nesinamoni yasara.
Tinotora mukombe ku microwave ku simba rakazara kwemasekondi makumi mapfumbamwe. Isu tinoongorora kana zvaitwa.
Kana iyo sinamoni mugcake yagadzirwa, unogona kuinakidzwa mumukombe kana kuisasanisa kuti ugovere.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Desserts » Sinamoni mugcake